Yakatemerwa Kubatana kwe Asset Kudzivirirwa kubva kumatare edzimhosva
Mubatanidzwa wakashomeka (LP) unoumbwa nemumwe kana vazhinji vanobatana navo uye mumwe kana vamwe vashoma vashoma. Icho chikamu chakaparadzana chepamutemo kubva kune vanobatirana vanobata zvido mairi. Izvo zvakada kufanana nehukama hwese, chengetedza iyo yakasarudzika yakatemerwa chinzvimbo chinzvimbo chevashoma vanobatirana. Kunetseka kwekutyaira kunowanzo dzivirirwa kubva pachisungo uye kuchengetedzwa kwemidziyo kune yakatemwa kudyidzana chivakwa. Uyezve iyo LP inopa kugona kugovera mari pakati pevakawanda vanobatirana. Iyo LP inopa mutero mabhenefiti emabhizimusi akadai sekudyara zvivakwa uye izvo zvaisazogoneka pasi pekambani yakajairwa.
Ivo vese vanobatsirana vane basa rekuita kwezuva nezuva kwekambani. Ivo zvakare vane mutoro wega pazvisungo zvawo uye zvikwereti. Kuti utore chikwereti, nyanzvi dzinowanzopa mazano ekuti iwo musimboti unoshandisa kambani kana yakashomeka dhizaina kambani seyakajairika mudiwa. Kuisa chinzvimbo chakadai munzvimbo iyi kunodzivirira mapato anotonga kubva kumatare emabhizinesi. Vashoma vadyidzani vanodyara mari mukambani uye vanogovana mune purofiti, asi havatore chikamu mukuita kwezuva nezuva kwebhizinesi. Mhosva yavo, kana kambani ikamhan'arirwa, inoganhurirwa mukuenzana nemari yemari yavanodyara.
Mashandisiro anoita Vanhu Kushandisa Kudyidzana Kudyidzana
Mabhizinesi anoronga sekudyidzana kushoma anowanzozviita kana tarisiro iri pane imwechete kana shoma nguva chirongwa. Muenzaniso wechiitiko chebhizinesi uko kudyidzana kushoma kunowanzo shandiswa kuri mukuvakwa kwezvivakwa kana muindasitiri yemafirimu. Mune iyo Real Estate mamiriro, general uye vashoma vanobatana vanouya pamwechete kuti vashande pane pfupi pfupi chirongwa, basa rekuvaka. Vashoma vadyidzani vanodyara mari uye ivo vese vadyidzani vanogadzirisa iko kuita. Kudyidzana kushoma kunowanzo shandiswa kukurudzira kudyara kwemari nekupa varimi chikwereti chakaringana. Chibvumirano chakakwenenzverwa chakaringana chekudyidzana ndiyo hwaro hwekudyidzana kwakarongeka kwakaringana. Chibvumirano ichi chinowanzo kuve gwaro rakasainwa pachivande iro risingowanzo nyorwa paruzhinji.
Semuenzaniso, B. Smith ane ziso rake pane imwe nzvimbo yenzvimbo munzvimbo iri kukura. Ane zano rekuti anovaka sei zvine mutsigo dzimba gumi pane chivakwa asi haana mari yekupedzisa basa. Shamwari yake, Jeff, ane mari yekudyara asi haazive kugadzira ivhu. Bill naJeff vanogona kuumba kudyidzana kushoma kunozo tendera Jeff kudzikisira chikwereti chake. Nekudaro, Jeff anopa capital yake kuLP mukutsinhana neanofarira muhukama hushoma. Bill anoita sevamwe mudiwa uye anotarisira kuvaka. Zvakanakira, kutora dziviriro yemutambi nhanho yekuenderera mberi, Bill anogona kuisa kana kuumba yakashomeka kambani yezvikwereti kuti ive mudiwa wese. Iyi mamiriro ezvinhu yaizobvumidza yakakwira chikwereti uye kuchengetedzwa kwemidziyo kwaBill naJeff mune yavo bhizinesi.
Kubatsira kweKushoma Kudyidzana
Mutero mabhenefiti, kuchengetedzwa kwemidziyo, uye kuchengetedzwa kwemutoro kune vashoma vanobatirana ingori mashoma ezvakanakira anowanikwa mukati mehurongwa hweKubatana Kudyidzana. Kana mumwe mukwikwidzi akamhan'arwa, zvinhu zviri mukati mehukama hushoma zvinodzivirirwa kubva pakubatwa.
Pamusoro pezvo, zviri nyore kukwezva varimimari kune bhizimusi chirevo sevamwe vashoma. Kubatana kushoma kunoonekwa sechimwe chikamu chepamutemo, uye nekudaro vanogona kumhan'ara, kumhan'arwa, uye kuve nepfuma. Kugadzira kudyidzana kushoma kunobatsirawo nekuvimbika, kusazivikanwa, kuchengetedzwa kwematare, uye inokutendera kuti ubvise mabhenefiti evashandi.
Mimwe yemabhenefiti aya ndeiyi:
Inopa mamiriro epamutemo kutanga kwebhizinesi
Mhindu inoshumwa kune avo vanobatirana 'emunhu mutero anodzoka (pfuura nemutero)
Kuchengetedzwa kwemidziyo; kana mumwe mudiki akamhan'arwa, midziyo iri mukati meLP inodzivirirwa kubva pakubatwa.
Vashoma Partner vanodzivirirwa kubva pamutoro mune bhizinesi mhosva
Kudyidzana Kudyidzana chikamu chakasiyana chepamutemo chinogona kuve chako chivakwa, kumhan'arira, uye kumhan'arirwa
Kukanganisika kweKushoma Kudyidzana
Mune Partnership Yakatemerwa, mudyandigere ane mutoro wekumhanyisa bhizinesi uye ane mutoro wakanangana nezvisungo nezvikwereti zvekambani. Sechikamu chakaparadzaniswa chepamutemo, pane imwe huwandu hwemapepa hunodikanwa kuumba Yakabatana Kudyidzana. Kune zvakare mabasa emakambani, akadai semisangano yegore negore, ayo anodikanwa ehukama hushoma. Kudyidzana Kudyidzana kunofanirwa kuronga zvenguva yavo. Kunze kwekunge zvakarongerwa muchibvumirano chakatemerwa chekudyidzana, kudyidzana kunonyungudika mune chiitiko cherufu, kubhuroka, kana kuenda kwenhengo. Zvichienderana nemamiriro ezvinhu, iyo Kudyidzana Kudyidzana kunogona kusimudzira kusawirirana pakati pevamwe vadyidzani, uye zvokonzeresa kuti mumwe wako apinde muchibvumirano chinosunga zviri pamutemo pasina mvumo yevamwe vadyidzani. Nekudaro, zvakakosha kuti uve nechibvumirano chakabatana chakabatana.
Zvimwe zvezvipingaidzo zvakatsanangurwa ndezvi:
Mamwe magwaro epamutemo anodikanwa kupfuura General Kudyidzana
General Partner ane mutoro wakanangana nezvikwereti uye zvisungo zvekambani
Zvirongwa zvekudyidzana kushoma zvinofanirwa kucherechedzwa kuchengetedza bhizinesi mukumira kwakanaka uye kuchengetedza zvakaringana chikwereti chakashomeka
Simba rakakamurwa pakati pevamwe
Mukupedzisa, Kudyidzana Kudyidzana kunogona kuve rakakosha bhizinesi sangano rakarongedzwa uye rakanyorwa mushe.
Yakapedzisira Yadzikwa panaJune 15, 2019
Kuenzanisa Mhando dzebhizinesi
Nevada Bhizinesi Kubatsira
Ungatanga Sei Isingabatsiri Sangano / Corporation - Tsananguro & Mienzaniso
Chii chiri Kupinza?